သခင့်ညစာစားပွဲ - ဆွစ်ဇလန်ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂ
သခင့်ညစာစားပွဲသည် ယခင်က ယေရှုပြုခဲ့သောအရာ၊ ယခု သူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို အမှတ်အသားပြုကာ၊ အနာဂတ်တွင် သူပြုမည့်အရာအတွက် ကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မမင်္ဂလာပွဲကျင်းပသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ကို အောက်မေ့ရန် မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုယူကာ သူကြွလာချိန်အထိ သူ၏အသေခံခြင်းကို ကြွေးကြော်ကြသည်။ သခင်ဘုရား၏ညစာစားပွဲသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်အကြောင်း ကိုယ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစွန့်၍ အသွေးကိုသွန်းလောင်းတော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့သခင်၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (1. ကောရိန္သု 11,23နှစ်ဆယ် 10,16; မဿဲ ၂6,26-28)
ထိုညနေ၌ တပည့်တော်တို့နှင့် ဆွမ်းစားတော်မူစဉ် သစ္စာဖောက်ခံရသောအခါ မုန့်ကိုယူ၍ “ဤသူသည် သင်တို့အတွက် ပေးသော ငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအောက်မေ့၍ ဤသို့ပြုလော့” (လုကာ ၂2,19) ပေါင်မုန့်တစ်လုံးစီ စားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင့်ညစာစားပွဲကို သုံးဆောင်သောအခါတွင်၊
“ညစာစားပြီးသောခွက်သည် ထိုနည်းတူ၊ ဤခွက်ကား၊ သင်တို့အတွက်သွန်းသော ငါ၏အသွေး၌ရှိသော ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်” (း၂၀)။ ပွဲတော်မှာ စပျစ်ရည်အနည်းငယ်ကျိုကျစ်စဉ်၊ ယေရှု၏အသွေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သွန်းခဲ့ပြီး၊ ထိုသွေးသည် ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို အမှတ်အသားပြုကြောင်း သတိရပါ။ ပဋိညာဉ်ဟောင်းကို အသွေးဖြန်းခြင်းဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသကဲ့သို့၊ ပဋိညာဉ်သစ်သည် ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် တည်ခဲ့သည် (ဟေဗြဲ၊ 9,18-28) ။
ပေါလုပြောခဲ့သည့်အတိုင်း “သင်တို့သည် ဤမုန့်ကိုစား၍ ဤအသွေးကို သောက်သည်နှင့်အမျှ၊ သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသည်တိုင်အောင် ကြွေးကြော်ကြလော့။”1. ကောရိန္သု 11,26) သခင်၏ညစာစားပွဲသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ယေရှုခရစ်၏အသေခံခြင်းကို ပြန်ကြည့်သည်။
ယေရှုရဲ့သေခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အရာလား၊ ဆိုးတာလား။ သူသေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောအရာအချို့ရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော် ပို၍ ကြီးမားသောပုံမှာသူ၏သေဆုံးမှုသည်အကောင်းဆုံးသတင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှချစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူနှင့်အတူအစဉ်အမြဲရှင်သန်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေခံရန်သားတော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကြီးမားသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဒါအဖိုးတန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည့်လက်ဆောင်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုပါ ၀ င်သောလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လက်ခံသင့်သနည်း။ ဝမ်းနည်းမှုနှင့်နောင်တဖြင့်လော။ မဟုတ်ပါ၊ လှူဒါန်းသူသည်သူအလိုရှိသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစားကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖော်ပြချက်အဖြစ်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လက်ခံသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်ရည်ကျခဲ့လျှင်၎င်းသည် ၀ မ်းမြောက်ဖွယ်မျက်ရည်များဖြစ်သင့်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သခင်၏ညစာစားပွဲသည် သေခြင်း၏အမှတ်ရစရာဖြစ်သော်လည်း၊ ယေရှုသည် သေဆဲကဲ့သို့ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ - သေခြင်းတရားက ယေရှုကို သုံးရက်သာ ထိန်းထားတယ်ဆိုတာ သိထားခြင်းအားဖြင့် သေခြင်းတရားက ငါတို့ကို ထာဝစဉ် ဆုပ်ကိုင်ထားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားခြင်းအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုတယ်။ သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းကို အနိုင်ယူပြီး သေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့သော ကျွန်ခံသူအားလုံးကို လွတ်မြောက်စေသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိသည် (ဟေဗြဲ 2,14စာ-၁၅)။ အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့သော ရွှင်လန်းသောအသိပညာဖြင့် ယေရှု၏သေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိရနိုင်သည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ရွှင်လန်းမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေမည်ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည် (ယော၊ ၁6,20) သခင်ဘုရား၏စားပွဲသို့လာရောက်၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းသည် အသုဘအခမ်းအနားမဟုတ်ဘဲ အခမ်းအနားဖြစ်သင့်သည်။
ရှေးIsraelitesသရေလလူတို့သည်ပသခါပွဲ၏အဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့၏သမိုင်းတွင်အရေးကြီးသောအချိန်၊ လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်စတင်သည့်အချိန်ကာလကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးကြီးသောလက်တော်ဖြင့်သေခြင်းနှင့်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်။ သခင်ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ရန်လွတ်လာသည့်အချိန်တွင်ထိုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ယေရှု၏ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အချိန်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းကြည့်သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေခြင်းနှင့်အပြစ်၏ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ပြီးသခင်အားအစေခံရန်လွတ်မြောက်လာသည်။ သခင့်ညစာစားပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကြောင်းအတွက်ထိုအခိုက်အတန့်ကိုသတိရစေသည်။
သခင်ယေရှု၏ ကားစင်တင် အသေခံခြင်း သည် ၎င်းနောက် လိုက်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ကိုင်ဆောင်သူတိုင်းအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အသက်တာတွင်ပါဝင်သောကြောင့် သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ပဋိညာဉ်တရားသစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပါဝင်ကြသည်။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ငါတို့ကောင်းချီးပေးသောခွက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်လော။ ငါတို့ချိုးသောမုန့်သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်လော။ (1. ကောရိန္သု 10,16) သခင်၏ညစာစားပွဲအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုကို ပြသသည်။ ငါတို့က သူနဲ့ မိတ်သဟာယဖွဲ့တယ်။ ငါတို့က သူနဲ့ စည်းလုံးတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းက သခင်ယေရှု၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်ခြင်းအကြောင်းကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ခံယူကြသည် (ဂလာတိ) 2,20; ကောလောသဲမြို့ 2,20) ကွယ်လွန်ခြင်း (ရောမ 6,4) ထမြောက်တော်မူခြင်း (ဧဖက် 2,6; ကောလောသဲမြို့ 2,13; 3,1(ဂလာတိ) နှင့် သူ၏အသက် 2,20) ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ကိုယ်တော်၌ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိတော်မူ၏။ သခင့်ညစာစားပွဲသည် ဤဝိညာဉ်ရေးရာအမှန်တရားကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း အခန်းကြီး ၆ က ကျွန်ုပ်တို့ကို အလားတူပုံမျိုးပေးသည်။ “အသက်မုန့်” ဟု ယေရှု ကြွေးကြော်ပြီးနောက် “ငါ့အသားကိုစား၍ ငါ့အသွေးကို သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၍ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူကို ငါထမြောက်စေမည်။” (ယော. 6,5၄)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအစာကိုရှာဖွေရန် အရေးကြီးသည်။ သခင့်ညစာစားပွဲသည် ဤတည်ဆဲအမှန်တရားကို ပြသသည်။ “ငါ့အသားကိုစား၍ ငါ့အသွေးကို သောက်သောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ငါသည်လည်း ထိုသူ၌တည်၏” (း၅၆)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်လျက် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိတော်မူကြောင်း ပြသပါသည်။
သို့သော်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလျှင်မည်သည့်နေအိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုလည်းရပ်တန့်ပြီးစဉ်းစားသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ထဲသို့မ ၀ င်မီကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ပြုရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတံခါးကိုတောင်မခေါက်မီယေရှုသိသည်။ သူဝင်ချင်သည်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုခေါက်တဲ့အခါလူအတော်များများတံခါးမဖွင့်ခင်အမြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြတယ်။ သို့သော်လူသားများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုမသန့်ရှင်းနိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ၎င်းတို့ကိုဗီရိုထဲတွင်ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့အပြစ်တွေကိုဗီရိုထဲမှာဝှက်ပြီးယေရှုကို living ည့်ခန်းထဲခေါ်ဖိတ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမီးဖိုချောင်ထဲ၊ ပြီးတော့စင်္ကြံခန်း၊ ပြီးတော့အိပ်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုးဆုံးအပြစ်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အခန်းသို့ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုလည်းသန့်စင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာများများပိုမိုပေးအပ်သည်။
၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သခင်ဘုရား၏ညစာစားပွဲသည် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “လူသည် မိမိကိုယ်ကိုစစ်ကြော၍ ဤမုန့်ကိုစားစေ၊ ဤခွက်ကိုသောက်စေ။1. ကောရိန္သု 11,28) ကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်သည့်အချိန်တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအခမ်းအနားတွင် ပါ၀င်သော အရေးကြီးမှုကို သိရှိနားလည်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်သင့်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်သောအခါအပြစ်များကိုမကြာခဏတွေ့ရသည်။ ဤသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည် - သခင့်ညစာစားပွဲကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌သခင်ယေရှုကိုလိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူသာလျှင်ငါတို့၏အပြစ်များကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်များအား သခင်ဘုရား၏ညစာစားပွဲ ကျင်းပပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ သူဌေးတွေက အရင်လာပြီး ဖြည့်စွက်စာစားပြီး မူးတောင်သွားတယ်။ နွမ်းပါးသောအဖွဲ့ဝင်များသည် ပြီးသွားသဖြင့် ဆာလောင်နေခဲ့သည်။ ချမ်းသာသောသူသည် ဆင်းရဲသားတို့နှင့် မဆက်ဆံပါ (း၂၀-၂၂)။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၏ အသက်တာကို အမှန်တကယ် မမျှဝေဘဲ သူပြုမည့်အရာကို မလုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အင်္ဂါများဖြစ်ရခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ကြဘဲ၊ အဖွဲ့ဝင်များသည် အချင်းချင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု နားမလည်ကြပေ။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ် မိန့်မှာထားသည့်အတိုင်း အချင်းချင်း ဆက်ဆံခြင်း ရှိ၊မရှိ သိမြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်နှင့် စည်းလုံးပြီး ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်နှင့် စည်းလုံးမည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချင်းချင်း အမှန်တကယ် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ သခင်၏ညစာစားပွဲသည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုကို သင်္ကေတပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုကို သင်္ကေတလည်းဖြစ်သည် (အခြားဘာသာပြန်များက မိတ်သဟာယ သို့မဟုတ် မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း) ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။
ပေါလ်ကဲ့သို့ပင် 1. ကောရိန္သု 10,17 မုန့်တလုံးတည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် မုန့်တလုံးတည်း၌ ပါသောကြောင့်၊ သခင့်ညစာစားပွဲကို အတူတကွသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်တည်ကာ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ၊ အချင်းချင်းတာဝန်ယူမှုဖြင့် အချင်းချင်းဆက်နွှယ်နေသည့်အချက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့် နောက်ဆုံးညစာစားပွဲတွင် တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏အသက်တာကို ပုံဖော်ခဲ့သည် (ယော ၁း၁၊3,1စာ-၁၅)။ ပေတရုသည် ဆန္ဒပြသောအခါ၊ ခြေဆေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူ၏။ ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် အမှုဆောင်ခြင်းနှင့် အမှုတော်ဆောင်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်။
သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ ကြွလာချိန်အထိ စပျစ်နွယ်ပင်၏ အသီးကို မသောက်ရဟု ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာရေးဆရာ သုံးဦးက ပြောပြသည်။6,29; လုကာ ၂2,18; မာကု ၁4,25) ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည့်အချိန်တိုင်း၊ ယေရှု၏ကတိတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှတ်ရနေပါသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော မေရှိယ "ပွဲ" "မင်္ဂလာပွဲ" လည်း ရှိလိမ့်မည်။ မုန့်နှင့် ဝိုင်များသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံး အောင်ပွဲခံပွဲ၏ “နမူနာများ” ဖြစ်သည်။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “သင်တို့သည် ဤမုန့်ကိုစား၍ ဤခွက်ကိုသောက်သည်နှင့်အမျှ၊ သခင်ဘုရား၏အသေခံတော်မူခြင်းကို ကြွလာတော်မမူမှီတိုင်အောင် ကြွေးကြော်ကြလော့။”1. ကောရိန္သု 11,26).
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်အဖြစ်နောက်ကျောနှင့်တက်, အတွင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်။ သခင့်ညစာစားပွဲသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသည်။ ယင်းကြောင့်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ခရစ်ယာန်အစဉ်အလာ၏ထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာတစ်ခါတစ်ရံ၌၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ကျင်းပခြင်းထက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိသည့်သက်မဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာသို့ယိမ်းယိုင်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရာဓလေ့သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောအခါအချို့လူများသည်ဓလေ့ထုံးစံကိုလုံးဝရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အဖြေကအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ထားဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံဆောင်သဘောအရဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရန်အထောက်အကူပြုသည်။